Nhau - Famba muAPP pulp chigayo uye uone kuti muti unoita sei pulp?
Famba muAPP pulp chigayo uye uone kuti muti unoita sei pulp?
Kubva pane shanduko yemashiripiti kubva pamuti kuenda pabepa, yakafamba nenzira ipi uye yaive nerudzii runyaya? Iri harisi basa riri nyore. Iko hakuna chete maratidziro ematanho, asi zvakare epamusoro matanho uye akaomarara anodikanwa. Ino nguva, ngatifambei muAPP's pulp chigayo kuti tiongorore bepa kubva 0 kusvika 1.
Mushure mekupinda mufekitori, huni mbishi zvigadzirwa zvinotemwa kuita hurefu zvinosangana nezvinodiwa zvemidziyo, uye ipapo jasi (bark) risingakodzere hunhu hwehupfu hunosvuurwa. Yunifomu uye yepamusoro machipisi machipisi anotumirwa kuhuni chip yekubikisa chikamu kuburikidza neyakavharika irikupa system. Idzo dzakasara huni machipisi dzinopwanywa uye dzinopiswa muchibhaira kuti dzibudise magetsi. Mvura kana zvimwe zvinhu zvinogadzirwa panguva yekugadzirisa zvichagadziriswa zvakare mumagetsi kana chiutsi.
Maitiro ekupura anosanganisira kubika, kubvisa marara, kubvisa lignin, kuchenesa, kusefa kwemvura uye kugadzira, nezvimwe. Kuedzwa kwetekinoroji kwakakwirira, uye zvese zvese zvinokanganisa kunaka kwepepa
Iyo yakabikwa huni pulp inotumirwa kune iyo oxygen okisheni chikamu mushure mekusvibisa kwabviswa muchikamu chekuvhenekesa, uko lignin iri muhuni hwehuni inobviswa zvakare, kuitira kuti pulp ive nerinani bhuregi kugona. ye element-yemahara chlorine, uye wozobatana neakakwira-anoshanda ekudhindisa pulp yekuwachisa michina kuona kuti chakaburitswa chiuru chine hunhu hweyakagadzikana mhando, yakachena kuchena, yakachena hutsanana, uye yepamusoro muviri zvivakwa.
Munguva yehuni chip yekubika, yakawanda yakasviba yakasviba mvura (inowanzozivikanwa se "dema dema") ine alkaline lignin inogadzirwa. Iko kunetsekana kwekurapa dema dema rave sosi huru yekusvibisa mumapurpiti uye mapepa emabhizinesi.
Iyo yemhando yepamusoro alkali yekudzoreredza inozoshandiswa kuisa iyo yakakora zvinhu kuburikidza nekupwa uye nekupisa mubhaira. Iyo yakasimba-yekumanikidza mweya inogadzirwa inoshandiswa kune simba rekugadzira, iyo inogona kusangana neanosvika makumi mapfumbamwe muzana emagetsi anodikanwa epurpu yekugadzira mutsara, uye yepakati uye yakaderera-kumanikidza mweya inogona kushandiswazve kugadzirwa.
Panguva imwecheteyo, alkali inodiwa mukuputika inogona zvakare kudzokorodzwa mune alkali yekudzoreredza system. Izvi hazvingoderedze chete mutengo wekugadzira, asi zvakare zvinowana kuchengetedza kwezvakatipoteredza, kuchengetedza simba uye kudzikisira mweya.
Iyo yakaumbwa pulp bhodhi inotemwa neyekucheka bepa mune zvakatemwa zvehumwe huremu uye saizi, uye wozoendeswa kune yega yekutakura tambo.
Zvekurerukirwa kwekufambisa, pane akapera maspu mapuraneti pane inoendesa bhandi, uye ese anoongororwa kunze mushure mechena uye kusvibiswa chiyero.
Iyo michina iri chaizvo yakazara otomatiki mashandiro, iine zuva nezuva kuburitsa zviuru zvitatu zvematani. Kunze kwekuchengetedza kwemuchina, dzimwe nguva dziri mukushanda kusingamisike.
Mushure meinotevera roll roller inobatanidza iyo pulp bhodhi, ichaputirwa netaundi repepa kufambisa anotevera kupakata nekufambisa mashandiro, uyezve kudzivirira kusvibiswa kwepurp board panguva yekutakura.
Kubva ipapo, iyo inkjet muchina unosasa iyo serial nhamba, zuva rekugadzira, uye QR kodhi yeiyo pulp bhodhi. Iwe unogona kutsvaga kwakatangira mapurpu zvichibva paruzivo rweiyo kodhi spray kuti uone kuti "ketani" haina kutyorwa.
Ipapo iyo stacker inokwenenzvera mabhegi madiki masere muhombodo imwe hombe, uye pakupedzisira inoigadzirisa nemuchina wekusunga, iyo iri nyore kune forklift mashandiro uye doko kusimudzira mashandiro mushure mekunze uye kuchengetera.
Uku ndiko kupera kwe "pulp" link. Mushure mekudyara sango nekugadzira pulp, mapepa anozogadzirwa sei zvinotevera? Ndokumbirawo umirire mitezo yekutevera.